Kulankii wasiirada xukuumada federaalka iyo Saciid Deni oo is faham waa kusoo dhamaaday - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Kulankii wasiirada xukuumada federaalka iyo Saciid Deni oo is faham waa kusoo dhamaaday
Kulankii wasiirada xukuumada federaalka iyo Saciid Deni oo is faham waa kusoo dhamaaday
October 9, 2019 Duceysane566
Warar laga helayo magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in natiijo la’aan uu ku soo dhamaaday kulan saacado badan qaatay oo u dhaxeeyay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya iyo Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni.
Wasiiradan oo uu hoggaaminayay Axmed Ciise Cawad ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Boosaaso, iyagoo u socday sidii loo xalin lahaa khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo Puntland.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in wasiiradan ay ka dalbadeen Madaxweyne Saciid Deni in uusan ka qeyb galin caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dowladda Federaalka ay sheegtay in aysan aqoonsaneyn.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in Madaxweyne Saciid Deni uu u sheegay Wasiirada in mar walba ay Puntland diyaar u tahay wada hadal, isla markaana ay doonayaan in la fuliyo wixii horay lagu wada heshiiyay.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Madaxweynaha Puntland Saciid Deni uu u sheegay wafdiga Wasiirada inuu ka qeyb geli doono caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Wasiirada ka socday Xukuumadda ee ka soo jeeda Puntland ayaa ku guuldareystay qorshaha ay u socdeen, waxaana la filayaa in maanta ay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho.
Wakiilada Beesha Caalamka ee ka qeyb galay shirkii todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay xaliso khilaafka u dhaxeeya iyaga iyo Maamul Goboleedyada, si loo gaaro siyaasad loo dhan yahay oo ku saleysan wada shaqeyn iyo degenaansho siyaasadeed.
Wasaarada arimaha gudaha oo magacowday gudiga farsamada maamul usamaynta galmudug
Safarkii Saciid Deni ee kismaayo oo dib u dhac ku yimid
Qalbi-Dhagax oo Baajiyey Booqashadiisii Cadaado
Guddoomiyaha G/Banaadir oo dhagax-dhigay dhismaha Waddo Laami ah (Sawirro)
Wasiirka Arimaha Gudaha DFS ayaa si weyn loogu soo Dhaweeyey Cadaado (Sawirro)